मुस्लिम परिवारका सैफ अली खानको घरमा भब्य क्रिसमस पार्टी, को को भए सहभागी ? – Khabaarpati
December 25, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on मुस्लिम परिवारका सैफ अली खानको घरमा भब्य क्रिसमस पार्टी, को को भए सहभागी ?
एजेन्सी । अभिनेता करीना कपूर र सैफ अली खान परिवारले सानदार क्रिसमस पार्टीको आयोजना गरेका छन् । उनीहरुले क्रिसमसको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीको आयोजना गरेका हुन् । उनीहरूको खानाको तस्बिरहरू सोशल मीडियामा भाइरल भएका छन्। करीना कपूरले रातीको खानाको फोटो पनि फ्यानहरूसँग साझेदारी गरेकी छन्डि नरको लागि करीनाले कालो रंगको एक चरणको पोशाक लगाएकी छन् । फोटो साझेदारी गर्दा, करीनाले लेखेकी छन्,( त्यो न्यानो, अस्पष्ट भावना मेरी क्रिसमस व्यक्तिहरू ❤️❤️
सोहा अली खान, कुणाल खेमू पनि करीना र सैफसँगै सामेल भएको देखिन्छ । कुणाल जहां सेतो रंगको पोशाकमा देखा परेका छन्। रातो रंगको पहिरनमा सोहा सुन्दर देखिएकी छन् ।करिश्मा कपूर पनि खाजाको लागि आइपुगेको देखिन्छ। उनी हरियो रंगको शिममेरी टोप र स्कर्ट लगाएकी छन् । उसले क्रिसमस हेयरब्यान्ड पनि लगाएको देखिन्छ ।
करिश्मा पनि आफ्नी छोरी अडारा संग पार्टीमा आएकी छन् । नताशा पूनावाला पनि आफ्नो पति अदार पूनावालासँग देखा परेकी छन् । सोहा अली खान, करिश्मा कपूर र करीनाले डिनरका धेरै फोटोहरू साझा गरे। सबैले मैनबत्तीको लाइट डिनरको आनन्द उठाएका छन्।करीनाको बारेमा कुरा गर्दा उनी दोस्रो पटक गर्भवती छिन्। करीना गर्भावस्थाको चरणको मज्जा लिदै छन्। करीना पनि गर्भावस्था मा काम मा पूरा ध्यान केन्द्रित छ।
यत्रो पैसा बोकेर सडकमा रात बिताउने झापामा हेर्नुहोस भिडियो
मिस इन्डिया बन्न सफल यि सुन्दरी नायिकाले लामो समय लुकाइन् उमेर, तर वच्चा जन्मिएपछि
November 18, 2020 November 18, 2020 Khabar Pati